Indoda yaseTaurus ebhedini: Yintoni onokuyilindela kunye nendlela yokuMvula - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda yaseTaurus ebhedini: Yintoni onokuyilindela kunye nendlela yokuMvula
Indoda yaseTaurus ebhedini: Yintoni onokuyilindela kunye nendlela yokuMvula
Ngelixa kukho abantu abasebenzisa isondo njengesixhobo sokulwa noxinzelelo okanye njengendlela yokubonisa ubudoda babo, indoda yaseTaurus yeyona iyithandayo isondo ngenxa yokuba yenye yezinto ezithandayo ukuyenza.
Mhlawumbi amanye amadoda akonwabeli ukwenza uthando, kodwa lo mfo uyayenza. Njengomnye wabathandi ababalaseleyo kwi-zodiac, indoda eseTaurus inomdla kwaye ihlala isazi ukuba iqabane linokuziva njani. Akayi kudinga ukukhuthazwa ebhedini njengoko inguye oza kuqala xa izinto zishushu.
Indoda yaseTaurus iyazi ngokwesondo isencinci. Uneminqweno yesini kwiminyaka yakhe yobuntwana. Xa emncinci, ufuna ukuchitha ixesha nabafazi kodwa unomdla kakhulu wokwenza into.
Njengomntu mdala, unokuba naye nawuphi na umntu obhinqileyo njengoko enomnqweno ofanayo kodwa ekugqibeleni unesibindi.
Ukwabelana ngesondo kuza nentuthuzelo
Isandulelo sendoda yaseTaurus enikezela iqabane layo inokubonakala ilungisiwe ngaphambili. Akathandi ukwenza uthando kuloo ndawo. Ukuba oku kuyenzeka, kwenzeka kuphela kuba ucinga ukuba umzuzu ugqibelele. Yindoda ukuthatha izinto kancinci.
Musa ukulindela ukuba angacinga kakhulu ebhedini. Uya kuhamba kuphela neendlela esele zaziwa. Kwaye uyinkosi yezi ndlela. Uninzi lunokuthi ulula xa kufikwa ekwenzeni uthando.
Kwaye kuyinyani njengoko indlela yakhe ithe ngqo kwaye kulula. Nangona kunjalo, uyathanda ukulala ngesondo rhoqo kwaye rhoqo. Indoda yaseTaurus inamandla amakhulu ebhedini, ngoko unokulibala konke malunga nenyaniso yokuba ayiyinto yokucinga.
ngomatshi 29 ukuhambelana kweempawu zodiac
Ukuba ukunye nendoda kulo mqondiso, uya kukhokela kwaye ucebise ngezinto ezintsha. Akayi kuthi hayi kwiindidi ezahlukeneyo.
Kodwa lumka. Kuya kufuneka wenze iingcebiso ezichuliweyo njengoko engathandi ukunyanzelwa ukuba enze izinto. Njengophawu loMhlaba, indoda eseTaurus izimisele kwaye inenkani. Yiba nobuqili okanye angazukuyeka iindlela zakhe.
Awukho omnye umqondiso wokonwabela intuthuzelo ngaphezu kweTaurus. Ukuba ufuna ukubonelela ngendawo efanelekileyo yokwenza uthando kuye, mse ebhedini ubeke umculo kuwo. Enye i-champagne iya kugqibelela njengoko ethanda ukuyikhotha kumzimba ohamba ze weqabane.
Uphawu lweTaurus luvuliwe ngamavumba. Iphunga lomzimba wesetyhini liya kuba kuye i-aphrodisiac yangempela. Unemikhuba yakhe yangaphambili kwaye unokuncancisa iinzwane zakho okanye enze isondo ngomlomo. Ezi zinto ziyamjika.
Amadoda amaninzi eTaurus alala ngesini. Bathanda ukuba namava amaninzi ahlukeneyo, ke bayakonwabela ukwenza uthando kunye nesini. Indoda yaseTaurus ine-libido eyandisiweyo.
Angalala nawe kusasa kwaye ahambe nomfana ngokuhlwa. Uyakuthanda ukuyenza ezinqeni kwaye uyakuthanda nokwabelana ngesondo ngomlomo, kokubini ukuyenza kunye nokwenziwa. Akunakuthethwa ukuba ungumthandi onomdla.
Unomonde kwaye akancami ade ayifumane le nto ayifunayo. Ukuba ufumene umfazi ogqibeleleyo kuye, kuya kuba nzima kuye ukuba abaleke uthando lwakhe.
Okukhona eya kumala, kokukhona uya kunyanzelisa ukuba abe naye. Ayikho enye indoda enokuthi inyanzelise ngaphezu kwendoda eTaurus. Wazi ngokupheleleyo ngomzimba wakhe kwaye uyayiqonda inkanuko kunye neenkanuko.
Xa lo mfo efuna ukukholisa inenekazi, uya kulungiselela useto lothando kuye. Kwakhona, kubalulekile ukuba akhululeke xa esabelana ngesondo. Uthanda umgangatho kwaye ubeka imali eninzi ekuhlobiseni indawo yakhe. Ukuba awuwi ngokulula ezingalweni zakhe, uya kuba nesiselo okanye ezimbini aze alale.
Musa ukudlala nzima ukufumana kunye nendoda yaseTaurus okanye awuyi kubona nayiphi na isondo kuye. Ngaphandle kokwenza uthando, ezinye izinto ebomini bakhe kukutya nokusela. Kungenxa yoko le nto anokuba neengxaki zobunzima.
Uphawu lweZodiac ngoMeyi 21
Uya kuhlala efuna okungakumbi, nokuba yeyantoni: isini, ukutya, iziselo. Ungumntu ophantsi emhlabeni, kodwa akanakuyeka ukuzonwabisa ngezi mfuno.
Akafuni kuqinisekiswa ebhedini. Kungenxa yoko kumnandi ukuba kunye naye. Akunyanzelekanga ukuba umdumise ngokwenza kwakhe uthando. Uthanda abafazi ngendlela abayiyo, kwaye akafuni kutshintsha mntu.
Uchitha imali yakhe kwizinto ezibizayo njengoko ekhetha umgangatho kunobungakanani. Unokumangalisa umthandi wakhe ngezipho ezibiza kakhulu kwaye ubeka bucala nakwikamva.
Amadoda aneLanga eTaurus azinikele, asebenza nzima kwaye asebenza ngokufanelekileyo. Ukunika ingqalelo impilo yakhe ngaphezu kweminye imiqondiso, indoda yaseTaurus ithatha ixesha elide ukuba iphinde ibuye kwisifo.
Ukuba ufuna ukuba yinenekazi lalo mfo, vula kwaye umxelele into oyifunayo. Cofa kuTwitter
Musa ukumcela umngeni njengoko elibala kwaye exolela ngobunzima. Ingabonakala ngathi inoxolo ngaphandle, kodwa ngaphakathi inokuba nomsindo kakhulu.
Abo bazalwe kwisiqingatha sokuqala seTaurus njengemisebenzi yomzimba. Baphantsi komhlaba kunye nenjongo. Ungazami kwaye uwagcine ecaleni kwakho ngenkani njengoko bengazukuvuya kwaye baya kutyhila icala labo elinomsindo. Abo bazalwa kwisiqingatha sesibini seTaurus bathetha inkohlakalo.
Uninzi lwabantu abakulo mqondiso banomona. Banobumnini ngezinto zabo, ke yinto eqhelekileyo ukuba bafana namaqabane abo. Indoda yaseTaurus ihlala ihlala izihlobo nabantu ababethandana nabo ngaphambili. Unenkani kakhulu, uya kuhlala ufumana abantu abazalelwe kulo mqondiso besilwa ngezizathu ezilahlekileyo.
Abo bazalwa kwiiveki ezimbini zokuqala zeLanga eTaurus abazukuphelelwa ngumonde. Yonke iTaurus ihlala ichitha amandla ayo kwizinto ezingafunekiyo kubo. Bonke banenkani, banomona, banemvakalelo kwaye balungile kwisini.
Indlela yabo yokuziphatha ngokwesondo yeyantlandlolo kwaye banokuyiqonda into efunwa liqabane. Ukuba ufuna uzinzo kubudlelwane, ngokuqinisekileyo khetha indoda yaseTaurus njengeqabane lakho.
Ukwabelana ngesondo ngeTaurus: Izinto ezibalulekileyo kwiTaurus ebhedini
Ukuthandana nomntu weTaurus: Ngaba unayo into eyenzayo?
Ngaba Amadoda eTaurus Anomona Kwaye Anamandla?
Iimpawu zomntu weTaurus kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
I-Scorpio Agasti 2018 yenyanga ngeHhoroscope yenyanga
Amanqaku Ehoroscope 2021
NgoFebruwari 20 Zodiac ziiPisces-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Imiqondiso Yeenkwenkwezi 2021
IVirgo kunye neScorpio ukungqinelana kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Indibaniselwano yeVirgo Scorpio iyonwabisa nangakumbi kunakwithiyori aa ezi ziyancedisana kwaye ziyaxhasana kodwa zinokungavisisani phakathi kwabo. Esi sikhokelo sobudlelwane siya kukunceda uqonde lo mdlalo.
Imercury kwiNdlu yesi-7: Ibuchaphazela njani uBomi baKho noBuntu
Abantu abaneMercury kwindlu yesi-7 bakhetha ukusombulula iingxaki ngokunxibelelana, bethetha ngento engalunganga kwaye bavumelana ngeyona ndlela isebenzayo.
Nge-11 kaJanuwari iZodiac yiCapricorn-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Funda iprofayili epheleleyo yeenkwenkwezi yomntu owazalwa phantsi kwe-11 kaJanuwari zodiac, ebonisa uphawu lweCapricorn, ukuhambelana kothando kunye neempawu zobuntu.
Ngomhla we-16 kuMatshi iintsuku zokuzalwa
Fumana intsingiselo epheleleyo yeenkwenkwezi ngeentsuku zokuzalwa zika-Matshi 16 kunye neempawu ezithile malunga nomqondiso ohambelana ne-zodiac oyiPisces yiAstroshopee.com
Ngomhla we-11 ku-Matshi iZodiac ziiPisces-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Funda iprofayili epheleleyo yeenkwenkwezi yomntu owazalwa phantsi kwe-11 Matshi zodiac, ebonisa uphawu lwePisces, ukuhambelana kothando kunye neempawu zobuntu.
I-Aquarius kaJanuwari 2019 yenyanga yeHhoroscope
Ngelixa kuya kufuneka uthothise ulindelo lwakho lwe-Aquarius kuloJanuwari, oku akuthethi ukuba awuzukufumana zibonelelo zininzi kwimisebenzi yeenkwenkwezi kule nyanga, kubandakanya nenkqubela phambili yezicwangciso ezindala.
Ihashe lomntu iMonkey Mfazi ixesha elide ukuhambelana
Indoda yamaHashe kunye nenkosikazi yeMonkey inokwakha isibini esimangalisayo nesinomdla njengoko beqonda kwaye bezilungelelanisa ngokulula ukuze batshintshe.
Indoda eyi-Aries kunye ne-Sagittarius Woman yokuXhamla ixesha elide
Ungamtsala njani umntu wee-Aries: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni
ngaba scorpios amaxoki kunye cheaters
i-virgo libra cusp indoda ebhedini
indlela yokulukuhla iipisisi
yintoni umatshi 17 uphawu lweenkwenkwezi
yintoni uphawu lwe-21 zodiac
Umqondiso weZodiac kaJuni 21